लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक इन्जिनियर डा. बाबुराम गृह पृष्ठ
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक इन्जिनियर डा. बाबुराम भीमप्रसाद भुर्तेल सेनापति कटवाल प्रकरणमा विवादास्पद राष्ट्रपति डा. रामवरण यावदको असंवैधानिक कदमको कारणले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गिरेपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । यसको कारण संविधानसभा, संवैधानिक समितिको सभापति पद लामो समय रिक्त रहृयो । यस पदको रिक्तताले. संविधान निर्माण कार्यतालिका पटकपटक सरेको मात्र होइन संविधान लेखनमा समेत ढिलाइ भएको त छादैछ । अझै ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको छ । सत्ताको झेली खेलमा लिप्त राजनीतिक दलहरुका लागि संविधान लेखन प्रक्रिया प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र परेको छैन भन्ने यसले प्रस्टीकरण गर्दछ । जनताले नुनतेलमा समेत तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेको राजनीतिजीवीहरु देश र जनताप्रति जवाफदेयी र उत्तरदायी नबनिरहेको मात्र होइन सामान्य जिम्मेवारी बोधसमेत छैन । यसैबीच संवैधानिक समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने चर्चा चलेको छ । आगामी भदौ १२ गते यसको निर्वाचन गर्ने चर्चा छ ।
यसै चर्चाबीच एकीकृत नेकपा माओवादीले उक्त समितिको सभापतिमा आˆनो उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार र माओवादीलाई सत्ताबाट गलहत्याउने प्रपञ्च रच्ने २२ दलले बाबुरामविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय नै सार्वजनिक गरे । मिडियामा समाचार आयो माओवादीलाई संवैधानिक समितिको सभापति नदिने । मानौं कि बाबुारम यसको सभापति बने चिनियाा गणराज्य संविधान यहाा लागू गर्छन्जस्तो । सत्तासीन गठबन्धनरत दलहरुको यस निर्णयले कैयौं विषय टड्कारो रुपमा खडा भएका छन् ।
पहिलो विषय हो - माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि दलहरुबीच बढेको तिक्तता र असहमति झनै बढेर जाने निश्चित भएको छ । अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक कार्य गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास हो । यसका लागि पहिलो कार्य तोकिएको समयमा नयाा संविधान लेखन हो । संविधान जारी भएर पहिलो निर्वाचन नभएसम्म मुलुकमा सहमति र सहकार्य जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले होला, संसारको कुनै संविधान नलेखिने सातदलीय सहमतिमा गर्ने अन्तरिम संविधानमा गर्ने भनेर यही लेखियो । तर, यसको उल्लंघन गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेर सुरु गर्‍यो । र, कांग्रेस निरन्तर असमति र असहयोगको पर्याय बन्यो । पछि त माओवादी नेतृत्वको सरकरा नै गिरायो कांग्रेसले । यसरी बढेको राजनीति असमझदारी र सहकार्य अब एकअर्कोलाई निषेधको अवस्थामा पुगेको छ, बाबुरामविरुद्धको मोर्चाबन्दीले । यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ- अब संविधान बन्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
अहिले संविधान बनाउने असल नियत दलहरुमा भए अझै पनि हिजो सत्ता परिवर्तनको दर्मियान माओवादीसाग बढेको राजनीतिक तीक्तता र दूरीलाई कम गर्न माओवादीलाई यो पद सर्वसम्मतिले छोडिदिनुपर्दथ्यो । यसले माओवादीमा रहेको आक्रोश र असहमतिलाई मत्थर गर्न सहयोग गर्ने थियो । र, परिणाम यसले माओवादीलगायत सबै दलहरुलाई नजिक ल्याउने र संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन सहयोग पुग्ने थियो ।
दोस्रो - माओवादीको सहमतिबिना संविधानको \_'स\_' पनि पारित हुादैन । यस्तो अवस्थाबारे जानकार रहादारहादै माओवादीलाई निषेध गरेर संविधान निर्माण गर्ने कुरा गर्नु ब्राजिलियनहरुले सामान्य बोलचालमा हुन्न भन्न हो भनेजस्तै हो । अर्थात् ब्राजिलियनहरु हो भन्न होइन र होइन भन्न हो भन्छन । अहिले त्यही पन सत्तासीन गठबन्धनमा देखिएको छ । सहमति र संवादको कुरा गर्ने अनि एकपछि अर्को निषेध गर्ने अवस्था छ । अहिले माओवादीसाग एक्लै दुई सय ४१ सभासद् छन् । त्यो संख्या ४० प्रतिशतभन्दा केही धेरै हेा । सबै धारा दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको अवस्थामा ४० प्रतिशत विधायकहरुलाई नजरअन्दाज गरेर संविधान बनाउने गफ गर्नु सारा करदाता जनतालाई ढााट्नु हो ।
तेस्रो - बाबुरामप्रति यो देशका राजनीतिक दलहरुले गरेको सबैभन्दा कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिको योगदानको कदर र अभिनन्दन जीवनकालमै गर्नुपर्छ । जतिसुकै बाुबरामसाग विचारधारात्मक रुपमा असहमत भए पनि र जसले जेसुकै भने पनि अहिलेसम्म नेपालले तय गरेको राजनीतिक यात्रा र संस्थागत गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्ने व्यक्ति उनै हुन् । माओवादीको चुनावाङ बैठकपछि विकसित घटनाक्रम हो । यो बीचमा माओवादीले आˆना कार्यकर्ता थामथुम गर्न नारा जे लागए पनि बहुदलीयतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा अवतरण गर्ने कार्य बाबुरामकै देन हो । हिंसात्मक रुपमा पहिले भनेजस्तो सत्ता कब्जा गर्न सकिादैन र माओकालीन जनवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने मान्यता माओवादी नेतृत्व स्थापित गर्ने उनै हुन्, नेता प्रचण्ड भए पनि । यसको लागि बाबुराम व्यक्तिगत रुपमा अनेकौं लाञ्छनाको सिकार भएका छन् । उनी आˆनै दलभित्र सबैभन्दा बढी आक्रमणको सिकार भएका छन् । बाबुरामलाई सहानुभूति राख्ने उनको दलभित्रभन्दा बाहिर बढी होलान् ।
दलभित्र त एक पक्ष त उनलाई संशोधनवादी, भारतीय दलाल \_'र\_' को एजेन्टसम्मको बेतुकको लाञ्छना लगाउाछन् । अहिलको अवस्थाको राजनीतिक यात्रा गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेकै नाममा बाबुराम पार्टीमा कारबाहीका भागीदार भए । पुष्पलालको नियति दोहोर्‍याउनसमेत खोजियो उनीमाथि । व्यक्तिगत रुपमा अनेकन आरोप, गालीगलौजको भागीदार बनाइए र चरम मानसिक यातनाको सिकारमसेत भए । तर, देशका लागि उनी आˆनो इमानदारीबाट चुकेनन् । देशमा बिहारी शैलीकै भए पनि गणतन्त्रचाहिा स्थापित हुनैपर्द भन्ने यिनकै मान्यताका कारण माओवादी यहाासम्म आयो । यसै मान्यताकेा पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपालसम्म लागेका हुन् ।
बाबुरामले देश र समाज रुपान्तरणका लागि व्यक्तिगत रुपमा ठूलै त्याग गरेका छन् । एक प्रतिभाशाली योजनाकार र त्यस्तै क्षमता इन्जिनियर पनि हुन् उनी । व्यक्तिगत सुखको खोजीमा हिाडेका भए निजी जीवन धेरै उन्नतस्तरमा बिताउन सक्थे । तर, उनी मर्ने डर नराखी हिाडे । व्यक्तिगत रूपमा उनले विगतमा हिाडेको बाटो मेरा लागि कहिल्यै स्वीकार्य थिएन र भएन । तर, उनी त्यो साहसको जहिल्यै प्रशंसक रहे । त्यसकारण उनी मेरो नजरमा सम्मानित नेताको रुपमा रहेका छन् । यस्तो धारणा धेरैको रहेको छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ । त्यस्तै आफू अर्थमन्त्री भएका बेला बाबुरामले एक पटक फेरि आˆनो श्रेष्ठता दर्ज गरेका छन् । भएकै कर प्रणालीमा बिना सुधार ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न सफल भए । यसबीच उनले देशप्रतिको इमानदारी प्रमाणित गरिसकेका छन् । माओवादीइतरका राजनीतिक दलहरुमा समेत प्रचण्ड र अन्य नेताभन्दा बाबुराम आक्रमणको सिकार बन्छन् अक्सर । किनभने, माओवादीको योजनाकार तथा गुदी उनी हुन् भन्ने आम बुझाइले उनलाई निस्तेज गर्न उनीमाथि आक्रमण बढी हुने गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई संवैधानिक समितिको सभापति हुने सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डिजाइनर तथा यसको. प्रमुख आर्किटेक्चर पनि उनै हुन । यसमा उनको लगानी छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नयाा संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उनीजतिको योग्य व्यक्ति को हुन सक्ला र ? यदि उनलाई यस पदमा जान रोक्नु भनेको सहमति र सहकार्यलाई निषेध गर्नु त हो नै, अहिलेसम्मको मुलुकले तय गरेको राजनीतिक यात्रासमेत गलत थियो भन्नु हो परोक्ष रुपले । आˆनो बच्चाको माया जन्म दिनेलाई मात्र यहसास हुन्छ र त्यो बाबुराममा रहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो माओवादीलाई यो प्रक्रिया बाहिर जान नदिन र माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जााच्ने अवसरका रुपमा पनि बाबुरामलाई सभापति बनाउनुपर्छ । नेपालीमा उखानै छ - चोरको हातमा तालाचाबी । यदि माओवादीसाग विश्वास छैन भने यो तालाचाबी दिएर उनीहरुको परीक्षण गर्न लाग्नुपर्नेमा यसको उल्टो काम गर्दैछन् गठबन्धनरत दलहरु । त्यसकारण सर्वसम्मतिले उनलाई सभापति बनाएर माओवादीसागको दूरी कम गर्न दलहरुले यो मौकाको रुपमा लिनुपर्छ । यदि संविधान निर्माण सााच्चै गर्ने हो भने । होइन राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने इच्छा भए १० वर्ष लागए पनि हुन्छ जनताले लाठो लगाएनन् भने ।
साभार : १ भदौ २०६६, अन्नपूर्ण पोष्ट